Wararka Maanta: Sabti, Mar 10, 2018-Madaxweyne Farmaajo oo digniin u diray dowladdaha iyo Shirkaddaha shisheeye
Madaxweyne Farmaajo oo soo hadal qaaday madaxbannaanida Soomaaliya ayaa sheegay in aan la ogolaan doonin in lagu xad gudbo midnimada Umadda Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ganacsi iyo maalgashi lagu sameyso balse ay muhiim tahay in ogolaansho looga haysto hay’adaha dastuuriga ah ee dalka.
“Soomaaliya waxey diyaar u tahay maal-gashi iyo ganacsi ay la wadaagto caalamka, cid kastoo dooneysa iney maal gashato Soomaaliya waa iney ogolasho ka hesho hey’adaha sharciga ah ee dowladda, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeyey ineysan ku xadgudbi karin Qarannimada iyo midnimada umadda Soomaaliyeed, waxaa ay ka faa'ideysanaayeen in aan kala qeysannahay, waxey ka faa'ideysanaayaan in aan taagdaran-nahay, laakiin walaahi Soomaali ma yaqaannaan, Soomaali waa dad qab leh, Soomaali waa dad damiir leh” ayuu sii raaciyey madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha oo dhinaca kale soo hadal qaaday Wada hadaladda Soomaaliland ayaa yiri''Waxaan dhawaan bilaabi doonaa Wada hadala aan la leenahay Somaliland, dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo ah oo aan kala maarmin, wixii khilaaf ah waxaan ku dhameyn doonaa miiska wada hadalka'' ayuu yiri madaxweynaha dalka.
Mar uu ka hadlayay ahmiyada ay leedahay in la bixiyo canshuurta ayuu sheegay in looga kaaftoomi karo kaalmaha shisheeye iyo in dowladdu bixiso mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada.
“Canshuurta waxaan uga kaaftoomi karnaa kaalmada shisheeye hadii la bixiyo waxaa noo fududaaneysa bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada, iyo sidoo kale inan al-Shabaab ka saarno meelaha ay heystaan” sidaasi waxaa yiri madaxweynaha dalka.
Inkastoo khudbada madaxweynuhu aheyd mid siweyn loo wada sugayay gaar ahaan la filayay in uu ku soo qaado khilaafka ka soo cusboonaaday dhinaca Imaaraadku ayuu madaxweynuhu muuqday in uusan si toos ah arintaa u abaarin.